0 Tuesday October 08, 2019 - 08:35:21
0 Monday October 07, 2019 - 11:17:03
Wararka ka imaanaya wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in Heshiis maxaabiis iswaydaarsi ah uu dhaxmaray Xarakada Jihaadiga Taliban iyo dowladda Mareykanka ee hoggaaminaysa dagaalka 18 sana jirsaday ee wadankaasi ka socda.
0 Sunday October 06, 2019 - 10:12:49
0 Sunday October 06, 2019 - 08:48:21
0 Thursday October 03, 2019 - 20:38:37
Dibad baxyo xooggan oo wata rabshado ayaa maalinki 3aad oo xiriir ah ka soconaya magaalooyinka kala duwan ee dalka Ciraaq kuwaas oo looga cabanayo shaqa la'aanta, nolol xumada iyo Sicir bararka ka jiro dalka, waxaana lasoo shegaya in tiro dad ah ay ku dhinteen, in ka badana 200 oo kalena ay ku dhawacmeen.
0 Sunday September 29, 2019 - 19:37:15
0 Saturday September 28, 2019 - 10:28:05
Jacques Chirac Madaxweynihii hore ee Faransiiska oo geeriyooday.
0 Thursday September 26, 2019 - 19:15:29
Isbitaal kuyaal magaalada Paris ee caasimadda wadanka Faransiiska waxaa ku dhintay mid kamida madaxweynayaashii ugu waqtiga dheeraa ee wadankaasi soo maamulay.
0 Thursday September 26, 2019 - 10:17:56
Xukuumadda Alwifaaq ee wadanka Liibiya ayaa si kulul u cambaaraysay taargeerada aan qarsoonayn ee qaar kamid ah dowladaha Carabta iyo kuwa reer galbeedka ay ufidinayaan maleeshiyaadka dagaal ooge khalifa Xaftar.
0 Wednesday September 25, 2019 - 19:59:15
0 Wednesday September 25, 2019 - 11:28:38
0 Wednesday September 25, 2019 - 11:02:01
Booliska Masar oo toogasho ku dilay 6 ruux oo lagu eedeeyay in ay katirsan yihiin Ururka Ikhwaanka.
0 Tuesday September 24, 2019 - 20:31:23
Dibad baxyo ballaaran ayaa wali ka socda magaalooyinka waaweyn ee wadanka masar kuwaas oo loogasoo horjeedo nidaamka dabadhilifka ah ee uu madaxda ka yahay Cabdi Fataax Alsiisi.
0 Tuesday September 24, 2019 - 11:29:29
WHO oo lagu eedeeyay in ay ka gaabisay ka hortagga Cudurka Ebola ee Wadanka Koongo.
0 Monday September 23, 2019 - 07:29:01
Hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda laheyn ee MSF ayaa ku eedaysay barnaamijka caafimaadka Q.Midoobay ee WHO in uu xagal daacin ku hayo qorshayaasha looga hortagayo in cudurka dilaaga Ebola uu kusii faafo wadanka Koongada Dimuquraadiga.
0 Saturday September 21, 2019 - 20:32:35
0 Thursday September 19, 2019 - 20:13:53
0 Thursday September 19, 2019 - 16:04:08
0 Wednesday September 18, 2019 - 19:00:51
Tobanaan qof oo muslimiin ah ayaa ku dhintay wadanka Liberia ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
0 Tuesday September 17, 2019 - 21:19:02
0 Monday September 16, 2019 - 09:04:15
0 Monday September 16, 2019 - 09:01:15
Shacabka Tuunis oo ku jees jeesay Doorashada Madaxtinimada ee bilaabatay.
0 Sunday September 15, 2019 - 20:20:46
Waxaa si rasmi ah loogu dareeray doorashooyinka madaxtinimada wadanka Tuunis ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika.
0 Sunday September 15, 2019 - 10:47:01
Waxaa sii xoogeystay khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay duqeymo ba'an oo shalay lagu qaaday keydadka shidaalka ugu waaweyn wadanka Sacuudi Carabiya ee dhanka dhulka Jaziiradda Carabta.
0 Saturday September 14, 2019 - 13:42:37
0 Thursday September 12, 2019 - 09:45:14
0 Tuesday September 10, 2019 - 19:20:29
0 Sunday September 08, 2019 - 09:09:54
0 Sunday September 08, 2019 - 08:50:36
0 Saturday September 07, 2019 - 20:16:14
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya fal dil ah oo dhowaan ka dhacay bartamaha magaalada Baariil ee caasimadda wadanka jarmalka, falkan dilka ah ayaa loo gaystay mid kamida hoggaamiyaashii muslimiinta Shiishaan ama Jeejniya.
Guddoomiyaha Shirkadda DP World Oo Xaqiijiyay in uu Booqasho ku tagay 'Israel'.
0 Thursday September 05, 2019 - 14:24:13
Wargeys kasoo baxay magaalada Tal'abiib ee caasimadda u ah Yahuudda ayaa soo daabacay warbixin daaha ka faysaday heerka uu gaarsiisanyahay cilaaqaadka ka dhaxeeya waxa loogu yeero maamulka isra'iil iyo dowladda imaaraatka Carabta.
Sawirro: Dowladda Hindiya Oo Malaayiin Qof Muslimiin ah dhulalkooda ka Barakicinaysa.
0 Wednesday September 04, 2019 - 20:33:03
dowladda Hindiya ayaa bilaabaysa in ay barakiciso malaayiin qof muslimiin ah oo ku dhaqan gobolka Assam ee dhaca bariga wadankaasi.
0 Tuesday September 03, 2019 - 12:04:26
0 Monday September 02, 2019 - 08:25:07
Maamulka Yahuudda iyo Ururka Xisbullaah isku magacaabay ayaa si wadajir ah ugu dhawaaqay in ay joojiyeen weeraro dhanka madaafiicda ah oo ay shalay isku dhaafsadeen deegaannada xuduud beenaadka dhaca.
Mareykanka Oo sheegay in Hoggaamiyaal Al Qaacidda katirsan uu ku beegsaday Waqooyiga Suuriya.
0 Sunday September 01, 2019 - 10:50:03
Dowladda Mareykak ayaa sheegtay mas'uuliyadda duqeyn dad badan ay ku dhinteen oo shalay ka dhacday waqooyiga Wadanka Suuriya.
24/02/2020 - 20:26:59
24/02/2020 - 12:12:26
22/02/2020 - 14:00:17
22/02/2020 - 13:44:09
21/02/2020 - 14:27:40
16/02/2020 - 09:57:18